Abafazi abasweleyo abakho! Kukho abo abangazi ukuba banokuzinyamekela njani, musa ukukrokra ngobuhle babo okanye besaba ukuwufumana kumanxeba enkwenkqonkqo, kwiingxaki kunye nokungaqiniseki. Ubuhle bawo bonke abesifazana buyingqayizivele kwaye bugqibeleleyo, nangona ingawa phantsi kweengqungquthela ezixhaphakileyo. Uyisipho esicacileyo esivela kunkulunkulu owazi kakuhle ukuba yintoni imbonakalo yokubonakalisa esinokuyibonakalisa indlela esinokuyenza ngayo kunye nobuntombi. Ngubani na ukuba sixoxe naye kwaye "sibuyise" sakhe sicwangciso?
Zinike phantsi kwetazi yegulane ye-plastiki kungekho sizathu esilungileyo - ulwaphulo-mthetho olubhekiselele kwendalo kunye nawe. Kwaye akukho bugebengu obungaphantsi kokungazi, apho umfazi engazi, engazi kwaye angafuni ukuzithandayo, unakekele impilo yakhe nobuhle. Indlela yokuba yindle, ebhaliweyo kwaye ebhaliweyo ayanele. Kuhlala kuphela ukulungelelanisa amava okubuyisela ubuhle kunye nokufumana iimfihlo zayo.
Ubungqina ngamandla amakhulu
Umbono wobuhle uhlukile kubantu bonke. Oku kungenxa yokuba ubuhle yiyona nto ibaluleke kakhulu kwihlabathi. Ukuba ezinye ziphelele kwaye zigqibelele, kwabanye - iqondo eliphezulu lokungendawo. Umzekelo obalaseleyo ngowona misonto enkulu yobhedu kwiintamo zabesetyhini abahlala kwiidolophana ezihle kakhulu eThailand okanye eMyanmar. Ukuphakama okuphakamileyo entanyeni kwenza ukuba amehlo abo bakhenkethi abonakale njengama-giraffe ahlekisayo. Kunzima ukucinga oku "ubuhle" ezitalatweni zethu, kwiiofisi nakumaphephancwadi. Kwiindawo ezifanayo, intamo ende engapheliyo iyabonwa njengelungileyo olugqibeleleyo apho amantombazana nabasetyhini banqwenela khona. Umzekelo ofanayo ufunyaniswa kwizizwe ezininzi, ukubunjwa kwendlela yobuhle kubangelwa yindawo yokuhlala, imozulu, imbali, izithethe kunye nendlela yokuphila. Sineengcamango zethu malunga nobuhle, imfashini efana nesimo sezulu - ayiqinisekanga ukuba yiyiphi into emangalisa ngayo, iza kuhamba ngokugqithisileyo kwezibikezelo zezulu. Ngoko kuvela ukuba ubuhle ngumqondo ongenangqondo kwaye awunakwenzeka. Ngenxa yoko, ukusukela ifashoni yinto engabongiyo kwaye yingozi. Nangona kunjalo, ngefestile iya kuhlala ihlelekile, ikulungele nokuthanda, njengendalo epheleleyo. Kwaye le miba yobuhle isoloko kwaye yonke indawo ikhona. Kuya kuba ngumnqweno!
Indlela yokuba mnandi?
Umxholo wobuhle besifazane uquka izinto ezintathu. Lo mntu, umzimba nomphefumlo. Ukukwazi ukufumana ubuchule kwaye ubonise ubuhle bakho kwihlabathi kukuvisisana nokubonakala kakuhle. Yiyiphi imimiselo ekufuneka ihlangane nakanjani, ukwenzela ukuba ibhinqa liziva lihle?
Uthando lomzimba. Ukutya okungcolileyo, imikhwa emibi, ukunyamekela ukunyamekela umzimba kunye nokulala ngokuzeleyo kuya kutshatyalaliswa kungekudala okanye kamva kube nemiphumo emibi: ubunzima obukhulu, izifo kunye nokuguga kwangaphambili. Umzimba - unjengomntwana - uhlala unomdla kwaye unakekele. Musa ukuvila ukuba "umqhube" kwindawo yokuzivocavoca, "sondla" ukutya okunempilo, "ubeke" ngexesha lokulala kunye ne-pamper ngokusilalisa, ukuhlaziya okuhlaziyiweyo kunye neenkqubo zokucoca. Ngenxa yoko, kuya kukubulela ngempilo kunye nomfanekiso omhle.
Ukukhathalela ukubonakala. Ukubonakala kwakho kukukhangisa! Uxelela abanye malunga nokuba uyabahlonela kwaye uyazixabisa ngokwaneleyo, kwaye baya kufunda kuyo ukuba uyazi njani ukuhlonipha abanye. Ukunyameka, ukubukeka okubuhlungu, ubunzima obunzima ukungabi nhlonipho kubantu ofuna ukuthetha nabo, ukulala nokuhlala. Qaphela ukuba unentloni ukubonakala esidlangalaleni, kwaye banento into yokuyithanda kwaye uthathe umzekelo, uzuze ubuhle bakho:
Ubuso. Ikhumba, amehlo, i-eyelashes, iinki kunye nemilebe zinokumelana nenani elikhulu leembonakalo. Naka ingqalelo kwinqanaba ngalinye lobuso, ungayihoyi ihambo ukuya kwi-beauty, uthathe izifundo zokuzenza, sebenzisa izimonyo zekhwalithi okanye ungayisebenzisi nhlobo. Kukho ubuhle obukhulu kwimvelo. Kodwa ngokubalulekileyo, musa ukulibala ukubeka ubumnandi obuhle ebusweni bakho.
Izinwele. Imbono yeendoda ayifuni nto (ngaphandle kwesifuba okanye imilenze) ukuba "unamathele" kwiinwele ezintle ezithandekayo kwaye zinika inkathazo kubo bonke abafazi. Qinisekisa ukuba zihlambulukile, zilungiswe kakuhle, zikhupha impilo. Yiya kwi-hairdresser, yenza iimaski kwaye uzikhusele kwiindawo ezinobundlobongela.
Ukucoca kunye nokuhamba. Izandla zowesifazane zithengisa ubudala bakhe ngaphezu kobuso bakhe. Ukugqithisa kwezandla kunye nezikhonkwane ezikhumbulukileyo ezikhumbulukileyo zihombise loo ntokazi kwaye zenze ngcono ukuzithemba. Ungashiyi iinyawo zakho zingalindelekanga. Ukuguqulwa kweentsimbi, izithende ezigqithiseleyo kunye nekhanda elimhlophe likhupha i-apostate.
Izambatho kunye nesitayela. Ukuba ibhinqa inomdla, inobungakanani. Ungazivumeli ukuba ugqoke i-sloppy, ungafanisi ubungakanani kunye nempahla yakho. Sebenzisa isiluleko sabasemagqabini abanegunya kunye nabayili bemifanekiso. Yenza isitayela sakho esiza kugxininisa isidima sakho kwaye ufihle iimpazamo.
Ubuhle bokwenene kwisitya
Ubuhle behlabathi elingaphakathi kufuneka linyamekele ngaphantsi kobuhle bomzimba. Ukuxubusha kwembonakalo kufumaneka kuwo wonke umntu, kuphela abo bathandwa kakhulu abamenywa emphefumlweni. Yiba nomkhenkethi! Wena unguThixo etempileni yomphefumlo wakho, kwaye kuya kuwe ukuba izulu okanye isihogo kuya kuba kulo. Qinisekisa ukuba apha kunye "neendwendwe" zakho zivakalelwa kwietempile zobuhle obungenakulinganiswa, ubuncwane kunye nokunethezeka. Yakha ihlabathi lakho kwiimpawu ezingenakulinganiswa ngemali, kwaye ubutyebi bakho buya kuba buncwane. Gcwalisa i-International yakho yangaphakathi ngobuhle, uthando, ububele, ukungathandeki, ukupha, ukukwazi ukuvelana novelwano. Zive ukhululekile ukupenda ihlabathi lakho ngemibala evela kwiimbonakalo ezithandekayo ezivela kumazwe anamangalisa, zicebisa ngezithethe ezivela kwimveli engaqhelekanga kunye neemvakalelo ezivela kwiincwadi ezizilumko kunye namafilimu echukumisa ingcinga. Ukunxibelelana nabantwana kunye nezilwanyana, ukuchukumisa ukukhanya kwabo, ukunyaniseka nokuzithemba, musa ukugqithisa abantu abadala-bahlala benento yokufunda. Yakha amava akho okuza kukuvumela ukuba ube nenjongo, ininzi kwaye ihle ngakumbi. Kwaye kubaluleke kakhulu, ukwabelana ngolwazi, ubanike, banike, kwaye abantu baya kubona ubuhle bakho, nokuba uba yinkati emnyama egumbini elimnyama.
Ukususwa kweenwele ezingafuneki ekhaya
Indlela yokukhetha izimonyo zesikhumba seoli: amathiphu amathathu avela kwiingcali
I-Hydrogen Peroxide kwiCosmetology
I-smokey efanelekileyo-imeko yebusika-2017
Ukusebenza "Anti-Zhir": imithetho emine yobuhle yesikhumba se matte
Indlela yokujonga ibancinci kuneminyaka yabo: 5 amaqhinga asebenzayo
Inkwenkwe yabafana ngoFebruwari 23: indlela enomdla kunye neyokuqala ukugcina iholide
Indlela yokukhulisa umntwana omncinci: iingcebiso kubazali
Ubomi bomntu womdlali we-actress u-Alisa Freidlich
Iinqebhoko nge tshokoleta, ilayisi kunye neebhokhwe
U-Timati wanikela u-Anastasia Reshetova ngeendandatho zedayimani
Ukutya apho iody ikhona khona
Iimbambo zeengulube ezixutywe kwihovini
Iintyatyambo zangaphakathi: sloumberbera